IATA: Vaovao misokatra ny fisokafan'i Etazonia ho an'ireo mpandeha vita vaksiny
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » IATA: Vaovao misokatra ny fisokafan'i Etazonia ho an'ireo mpandeha vita vaksiny
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny fanapahan-kevitry ny Biden Administration mba hahafahan'ny mpandeha vaksiny miditra any Etazonia miaraka amin'ny valin'ny fitsapana COVID-19 ratsy mialoha ny dia nataony tamin'ny voalohan'ny volana novambra dia noraisin'ny IATA.
Ny Biden Administration dia mamela ny mpandeha vaksiny hiditra ao Etazonia miaraka amin'ny valin'ny fitsapana COVID-19 ratsy alohan'ny dia manomboka ny volana Novambra.
Ny famelana ny fidirana any Etazonia ho an'ireo vita vaksiny dia hisokatra amin'ny dia any Etazonia ho an'ny maro izay voahidy tao anatin'ny 18 volana lasa.
Ity fanambarana ity dia manamarika ny fiovana lehibe amin'ny fitantanana ny risika mety hitranga amin'ny COVID-19 manomboka amin'ny fandinihana lamba firakotra eo amin'ny sehatra nasionaly ka hatramin'ny fanombanana ny loza mety hitranga amin'ny tsirairay.
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) nankasitraka ny fanapahan-kevitry ny Biden Administration mba hahafahan'ny mpandeha vaksiny miditra any Etazonia miaraka amin'ny valin'ny fitsapana COVID-19 ratsy mialoha ny dia nataony tamin'ny voalohan'ny volana novambra.
Ny tena zava-dehibe, ity dia manilika ireo antsoina hoe 212f fetra izay nanakana ny olona tsy hiditra an'i Etazonia raha toa ka tany amin'ny firenena 33 voafaritra izy ireo, anisan'izany ny UK, Irlanda, ny firenena Schengen rehetra, Brazil, South Africa, India, ary China tao anatin'ny 14 andro lasa.
“Dingana lehibe handrosoana ny fanambarana anio. Hisokatra ny famelana ny fidirana any Etazonia ho an'ireo nanao vaksiny mandeha any Etazonia ho an'ny maro izay voahidy tany ivelany nandritra izay 18 volana lasa izay. Vaovao tsara ho an'ny fianakaviana sy olon-tiana nijaly tamin'ny alahelo sy ny fanirery tamin'ny fisarahana izany. Tsara ho an'ny asa fivelomana an-tapitrisany maro any Etazonia izay miankina amin'ny fizahan-tany manerantany. Ary hampisondrotra ny famerenana amin'ny laoniny ny toekarena amin'ny alàlan'ny famelana ny tsena fitsangatsanganana asa aman-draharaha sasany, "hoy i Willie Walsh, IatăTale jeneraly.
"Ity fanambarana ity dia manamarika fiovana lehibe amin'ny fitantanana ny risika mety hitranga amin'ny COVID-19 manomboka amin'ny fandinihana lamba firakotra eo amin'ny sehatra nasionaly ka hatramin'ny fanombanana ny loza mety hitranga amin'ny tsirairay. Ny fanamby manaraka dia ny fitadiavana rafitra iray hitantanana ny loza mety hitranga amin'ireo mpandeha izay tsy mahazo vaksiny. Manondro ny fitsapana ho vahaolana ny angona. Saingy zava-dehibe ihany koa ny hanafainganan'ny governemanta ny vaksinin'ny vaksiny manerantany ary hanaiky ny rafitra iraisam-pirenena momba ny dia lavitra izay ifantohan'ny loharanom-panandramana amin'ireo mpandeha tsy voamarina. Tsy maintsy miverina amin'ny toe-javatra misy ny fahalalahana manao dia lavitra isika ", hoy i Walsh.